I-Malisa Visa ekwi-Intanethi | I-eVisa yoKhenketho | natvisa.com
Isicelo seMalaysia seVisa esikwi-Intanethi
Fumana i-Visa yakho ukuya eMalaysia akukho xesha kunye nenkqubo ye-visa entsha ye-elektroniki. Le yinkqubo ye-Intanethi eyaziswa ngurhulumente waseMalawi ngo-2016. Besebenzisa le nkqubo, abemi bamazwe ahlukeneyo bamazwe angaphandle ngoku bangafaka isicelo se-Visa yabo ngaphandle kokutyelela i-Embassy. Ekuphela kwento ekufuneka bayenzile kukugcwalisa iphetshana labo lesicelo se-visa kwi-Intanethi, dibanisa amaxwebhu afunekayo kwaye wenze intlawulo. Indawo ye-eVisa iyafumaneka kubemi bala mazwe alandelayo - i-China, i-India, iSri Lanka, iNepal, iMyanmar, iBangladeshi, iPakistan, iBhutan, iSerbia okanye iMontenegro.
Iindidi zeMalaysia Visa
Abahambi abenza isicelo se-eVisa eMalaysia kufuneka babe nala maxwebhu alandelayo - ikopi efundwayo kwiphepha langaphambili lepasipoti, ifoto yomenzi-sicelo kunye netikiti lokubuya lenqwelo elingqinisisiweyo. Ukuba umntwana uhamba naye, kufuneka anikwe isatifikethi sakhe sokuzalwa, kufuneka la maxwebhu atshekishwe kwaye alayishwe kunye nefom yesicelo se-visa.
Wonke umenzi-sicelo owenza isicelo se-eVisa eMalaysia kufuneka anikezele nge-imeyile esebenzayo. Le id ye-imeyile ibalulekile kuba isetyenziswa ngabafakizicelo ukufumana ulwazi malunga nenqanaba labo le-visa kunye neleta yokuvunywa kwe-visa.
Xa usiya eMalaysia, iindwendwe kufuneka zibe nepasipoti efanelekileyo. Umntu ngekhe ahambe aye eMalaysia ngepasipoti ephelelwe lixesha. Ke ngoko, ngaphambi kokufaka isicelo se-eVisa, iindwendwe kufuneka ziqinisekise ukuba ipaspoti yabo isebenza ngokusemthethweni iinyanga ezi-6 ubuncinci.
Olunye lwamaxwebhu abalulekileyo ekufuneka abahambi beze nawo ngelixa befaka isicelo se-eVisa bubungqina bendawo yabo yokuhlala. Oku kunokubandakanya iinkcukacha zabo zobhaliso ehotele, iinkcukacha zokubhukisha okanye nawaphi na amaxwebhu aza kubonelela ngolwazi ngamalungiselelo endawo yokuhlala komntu lowo.
Ukuvunywa kweMalaysia Visa
Kuya kufuneka ube ne-eVisa yakho xa ufika eMalaysia. Ivisa kufuneka ivunywe kwaye iprintwe. Ukufuduka kuya kucela ukuba babone uxwebhu xa befika.
Olunye uxwebhu olubalulekileyo ekufuneka abahambi baqhubeke nalo ukufikelela eMalaysia yipasipoti yabo esemthethweni. Kufuneka isebenze iinyanga ezi-6 okanye nangaphezulu.
Iinkcukacha zeMalaysia Visa
Yintoni iVisa eMalaysia?
Kwiminyaka emininzi, abantu abaya kumazwe asemzini kwafuneka bangene kwinkqubo ende ukuya kutyelela ilizwe langaphandle njengeMalaysia. Le nkqubo inzima kunye nexesha elithathayo yayinezithintelo ezininzi njengokutyelela kwindlu yozakuzo ngokwasemzimbeni, ukufaka isicelo kuxwebhu lokuhamba kwindawo ethile, njl njl. Le nkqubo yayinzima kakhulu kubantu abaninzi ababekulangazelela ukuya eMalaysia. Nangona kunjalo, urhulumente waseMalawi wenza utshintsho ngokufaka inkqubo ye-elektroniki yokulungisa i-visa. Ngo-2016, i-eVisa yaziswa ukwenza yonke inkqubo yokufumana i-visa ilula, ilula kwaye ingenangxaki. Oku kuvumele abemi abavela kumazwe aliqela ukuba benze izicelo ze-visa kwi-intanethi. Akukho mfuneko yokuba bandwendwele kwindlu yozakuzo okanye bachitha ixesha labo belinde emigceni.
Amanyathelo okufaka isicelo se-eVisa yaseMalaysia
Akukho mntu ufuna ukuchitha ixesha elininzi emini yabo elinde kwimigca kwaye ebaleka ejikeleza namaxwebhu okufumana i-visa. Ngokwaziswa kwe-eVisa, le nkqubo sele ilula kakhulu kubafakizicelo. Ngamanyathelo ama-3 alula, abantu ngoku banokufumana ileta yabo yokuvunywa kunye nokufumana i-visa yabo xa befika eMalaysia.
Gcwalisa ifomu lesicelo: Kuya kufuneka uqale inkqubo yakho yesicelo se-visa ngokugcwalisa ifom yesicelo. Awunyanzelekanga ukuba uye naphi na ukuze ufumane ifom. Ndwendwela iwebhusayithi kaRhulumente kwaye ukhuphele ifom apho. Gcwalisa ifom ngolwazi oluchanekileyo kwaye uye kwinqanaba elilandelayo.
Ungeniso lwamaxwebhu: Inyathelo elilandelayo lenkqubo yokwenza isicelo sevisa kukungeniswa kwamaxwebhu afunekayo kunye nefom yesicelo. Qiniseka ukuba uyaskena ngokucacileyo ukuze abasemagunyeni bafumane ulwazi abaludingayo.
Yenza intlawulo: Inyathelo lokugqibela lenkqubo yokwenza isicelo lifuna ukuba uhlawule umrhumo wevisa. Ungasebenzisa ikhredithi okanye ikhadi lebhanki ukugqibezela le nkqubo. Nje ukuba kwenziwe intlawulo, ifom yesicelo sakho iya kuthunyelwa ukuba iqhubekeke. Kwiintsuku ezimbalwa, ileta yakho yokuvunywa kwevisa iya kuthunyelwa ngeposi.
Ukufika kwabo kwisikhululo seenqwelomoya saseMalaysia, abahambi kufuneka bangenise ileta yabo yokuvunywa yi-eVisa kwabasemagunyeni apho. Emva kokujonga ileta, i-visa yokugqibela iya kunikwa iindwendwe, eziya kubavumela ukuba bangene kweli lizwe.
Imiyalelo yomntu ngamnye Ukufaka isicelo seMalawi Visa ekwi-Intanethi
Indawo yaseMalawi eVisa ifumaneka kuphela kubemi base China, India, Sri Lanka, Nepal, Myanmar, Bangladesh, Pakistan, Bhutan, Serbia okanye Montenegro.
Kwimeko apho umntwana (oneminyaka eli-18 nangaphantsi) ehamba, kufuneka ahambe nomzali omnye. Kuya kufuneka banikeze isatifiketi sokuzalwa esiya kuthi singqine ubudlelwane bomntwana kunye nomzali.
Yintoni iVisa abakhenkethi yaseMalawi?
Urhulumente waseMalaysia wazisa inkqubo ye-elektroniki apho iindwendwe ezinokuthi ngoku zifumane ii-visa zazo kwi-intanethi. Le mvume yokuhamba ivumela iindwendwe ukuba zingene kwimimandla yelizwe laseMalaysia.
Yintoni esebenzayo iMalaysia eVisa?
Ngawaphi amaxwebhu endiwadingayo ukufaka isicelo se-eVisa yaseMalaysia?
Uya kucelwa ukuba ungenise iskena sephepha elingaphambili lencwadana yokundwendwela, ubungqina bendawo yokuhlala, ifoto yomenzi-sicelo kunye nokuhamba uhambo okuqinisekisiweyo. Ukuba umntwana uhamba kunye, isiqinisekiso sakhe sokuzalwa masinikezelwe
Ngaba kufuneka ndenze naluphi uxwebhu xa ndifika eMalaysia?
Ewe, ekufikeni kweMalaysia, iindwendwe ziyacelwa ukuba zingenise la maxwebhu alandelayo i-eVisa evunyiweyo, uxwebhu lokuhamba, amatikiti okubuya endiza aqinisekisiweyo kunye nobungqina bendawo yokuhlala.
Leliphi inani lamangenelo elivunyelwe yenye ye-eVisa yaseMalaysia?
I-eVisa eseMalawi eyiyo ivumela ungeniso olulodwa noluninzi. Oku kuxhomekeke kudidi lwe-visa umntu afake isicelo kuyo.
Yeyiphi imihlali ipaspoti yam ekufuneka ihlangane nayo ukuze ufake isicelo se-eVisa e-Malaysia?
Ngaphambi kokuba ufake isicelo se-eVisa yokuya eMalawi, qiniseka ukuba unencwadana yokundwendwela esemthethweni iinyanga ezi-6 okanye ngaphezulu.
Yeyiphi indlela eqhelekileyo yokuhlawula umrhumo we-eVisa waseMalaysia?